U-Eli Roth uqondisa i-Killer Shark Movie MEG - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo U-Eli Roth uqondisa i-Killer Shark Movie MEG
U-Eli Roth uqondisa i-Killer Shark Movie MEG
by admin June 16, 2015 456 ukubukwa
Leli sonto ligubha iminyaka engama-40 yokuzalwa emihlathini, eyayikhishwe ekuqaleni kumathiyetha ngoJuni 20, 1975. I-Spielberg classic ibuyela kumatiyetha kule mpelasonto kumgubho, futhi manje kubukeka sengathi kungekudala sizoba nefilimu entsha sha kashark esizoyithokozela esikrinini esikhulu.
Okunhlobonhlobo wephule izindaba ezimnandi kulobubusuku ukuthi Umkhuhlane WeCabin/Ihostela Umqondisi u-Eli Roth usezingxoxweni zokuqondisa ukulungiswa kweNew York Times ethengisa kakhulu Meg: Inoveli Yokwesaba Okujulile kweWarner Bros., iphrojekthi yokuthatha isikhathi eside ebisezigabeni ezahlukahlukene zentuthuko cishe amashumi amabili eminyaka.
Le ncwadi, ebhalwe nguSteve Alten, imayelana noshaka omkhulu wangaphambi komlando. Indaba izungeze amadoda amabili ahlangana ndawonye ukuze anciphise ushaka wasendulo osongela ugu lwaseCalifornia. IMegaladon, ebhekwa njengesinye sezilwane ezinkulu kunazo zonke futhi ezinamandla kakhulu emlandweni, ingafinyelela ubude obungamamitha angama-60.
Kokubili iDisney neNew Line Cinema bake bazama ukuvumelanisa inoveli ka-Alten, futhi ngesinye isikhathi uGuillermo del Toro wahlanganiswa. Iskripthi esisha sabhalwa nguDean Georgaris, futhi kwakungamasonto nje ambalwa emuva lapho safunda khona iWarner Bros. yayifaka ukujwayela kushesha.
Meg uchazwe njengo “IJurassic Park enoshaka, ”Ngakho-ke singacabanga nje ukuthi impumelelo yokuqopha umlando I-Jurassic World inokuthinta okuncane ngesimemezelo sanamuhla. Abathandi benoveli sekuyiminyaka bezizwa ukuthi ukuzivumelanisa nezimo kungenza oshaka besabe futhi, futhi ngicabanga ukuthi uRoth uyindoda ephelele yalowo msebenzi.
Nakhu engikubiza ngezindaba ezinhle bangani.